ကာလင်နင်ဂရတ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရုရှားနိုင်ငံ ကာလင်နင်ဂရတ်အော့ဗလတ်ရှိ မြို့
ကာလင်နင်ဂရတ်မြို့(ရုရှား: Калининград; IPA: [kəlʲɪnʲɪnˈɡrat]; former German name: Königsberg; ရုရှား: Кёнигсберг, tr. Kyonigsberg; Old Prussian: Twangste, Kunnegsgarbs, Knigsberg)သည် ကာလင်နင်ဂရတ်အော့ဗလတ်(Kaliningrad Oblast)၏ အုပ်ချုပ်မှုဗဟိုဖြစ်ပြီး ဘောလ်တစ်ပင်လယ်နှင့်ထိစပ်နေပြီး ပိုလန်နိုင်ငံနှင့် လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံအကြားတွင် တည်ရှိသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ သီခြားနယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 54°42′01″N 20°27′11″E﻿ / ﻿54.70028°N 20.45306°E﻿ / 54.70028; 20.45306ကိုဩဒိနိတ်: 54°42′01″N 20°27′11″E﻿ / ﻿54.70028°N 20.45306°E﻿ / 54.70028; 20.45306
စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ၁၂၅၅ခုနှစ်
၂၂၃.၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၆.၁၁ စတုရန်းမိုင်)
၅ မီတာ (၁၆ ပေ)
• ခန့်မှန်း (ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄)
၁၉၀၀/km၂ (၅၀၀၀/sq mi)
ကာလင်နင်ဂရတ်အော့ဗလတ်, city of oblast significance of Kaliningrad
236001, 236003–236011, 236013–236017, 236019–236024, 236028, 236029, 236034–236036, 236038–236041, 236043, 236044, 236700, 236880, 236885, 236890, 236899, 236931, 236950, 236960–236962, 236967, 236970, 236980–236983, 236985, 236989, 236999
July 4; observed on the first Saturday of July
အလယ်ခေတ်တွင် ထိုဒေသသည် ဘောတစ်ပရပ်ရှားတို့၏ နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ခဲ့ပြီး Twangste ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ မြောက်ပိုင်းခရူဆိတ်စစ်ပွဲများ(Northern Crusades)အတွင်း ၁၂၅၅ ခုနှစ်တွင် Teutonic Knights တို့သည် ခံတပ်အသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် မြို့သည် ပရပ်ရှားနယ်(Duchy of Prussia)နှင့် အရှေ့ပရပ်ရှားနယ်(East Prussia)၏ မြို့တော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် မြို့တော်သည် ကြီးစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီး ရုရှားတို့သိမ်းပိုက်သောအခါတွင် မြို့အတွင်း နေထိုင်သူများ ထွက်ပြေးရခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မထွက်ပြေးရခြင်းတို့ ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့နေလူဦးရေမှာ ၄၃၁၉၀၂ ရှိခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Resolution #640
↑ Article6of the Charter of Kaliningrad states that the city may have an anthem, providing one is officially adopted. As of 2015[update], an anthem is not listed among the symbols of the city shown on the official website of Kaliningrad.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Official website of Kaliningrad. Passport of Kaliningrad Urban Okrug. (ရုရှား)
↑ ၄.၀ ၄.၁ Charter of Kaliningrad, Article 25
↑ Official website of Kaliningrad. Head of the City, Alexander Georgiyevich Yaroshuk. (ရုရှား)
↑ ၆.၀ ၆.၁ Russian Federal State Statistics Service (2011)။ Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1 (in Russian)။ Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census)။ Federal State Statistics Service။ June 29, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kaliningrad Oblast Territorial Branch of the Federal State Statistics Service. Оценка численности населения Калининградской области по состоянию на 1 января 2014 года (ရုရှား)
↑ ၉.၀ ၉.၁ Law #397
↑ Почта России. Информационно-вычислительный центр ОАСУ РПО. (Russian Post). Поиск объектов почтовой связи (Postal Objects Search) (ရုရှား)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာလင်နင်ဂရတ်မြို့&oldid=459464" မှ ရယူရန်
၇ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။